पानीको कमीले शरीरमा देखिने यी हुन् ९ समस्या
Vibes Nepal Team / शनिबार, असार ०५, २०७८ मा प्रकाशित
शरीरमा पानीको संन्तुलन बनाई रहनका लागी लगभग दैनिक ३ देखी ५ लिटर पानीको आवश्यक पर्दछ । जस मध्ये ७०० मिलि पानी खानाको माध्यम भएर प्रवेश गर्दछ भने ३०० मिलि पानी शरीर भित्रै उत्पन्न हुने गर्दछ । बाँकी पानीको पुर्ति भने पानी पिएर नै गर्नु पर्दछ ।
त्यसैले हाम्रा सवारीसाधनले मोबिल वा तेल सकिएपछि देखाउने लक्षण जस्तै पानीको कमी हुनासाथ हाम्रो शरीरले पनि त्यस्ता लक्षण देखाउन थाल्छ । दीर्घकालसम्म स्वस्थ रहनलाई प्रयाप्त पानी पिउनु पर्दछ।
अब जानौँ, पानीको कमीका कारण कस्ता समस्या देखा पर्छन् :
१. मिर्गौैलामा समस्या :
शरीरमा पानीको कमीले मिर्गाैलामा समेत समस्या देखिने गर्छ । रगतमा युरिया र क्रिएटिनाइनको मात्रा बढ्ने भएकाले त्यसले मिर्गौलामा असर गर्दछ । पानीको कमी हुँदा विकारयुक्त वस्तु बाहिर निस्कन पाउँदैन । फलस्वरूप मिर्गौला कमजोर हुन्छ ।
२. जोर्नी र मांसपेशीमा समस्या :
पानीले शरीरका जोर्नी तथा मांसपेशीलाई नरम बनाउने काम गर्छ । पानी कम भयो भने पिँडौला दुख्ने, बाउँडिनेजस्ता समस्यासमेत देखा पर्छ । साथै जोर्नीहरुमा दुखाइ बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
३. पाचनसम्बन्धी समस्या :
शरीरमा पानी कम हुँदा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको पनि कमी हुन्छ । अनि, पाचनसम्बन्धी समस्या आउँछ । पाचन प्रणालीमा समस्या आउँदा अल्सर हुने, पेटमा ग्यास जम्मा हुने आदि समस्या देखा पर्दछ ।
४. रक्तचापमा कमी :
यदि तपाईलाई पानीको कमी भएमा एक्कासि शरीरमा रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) घट्ने हुन्छ । ब्लडप्रेसर घट्दा मुटुको चाल बढ्ने, रिँगटा लाग्ने,जस्ता समस्या देखा पर्दछ।
५. टाउको दुख्ने, थकान महसुस हुने :
शरीरमा पानीको कमी भएमा थकान महसुस हुने र टाउको भारी भई दुख्ने हुन्छ । पानी कम हुँदा दिमाग मन्द हुन्छ । यसले आफ्नो सामान्य काम पनि गर्न मन लाग्दैन र ध्यान पनि जाँदैन । पानीको मात्रा अलिकति मात्र कमी हुँदासमेत पूरै शारीरिक प्रणाली नै कमजोर हुन्छ । यसको असरस्वरूप थकान महसुस हुन्छ । टाउको गह्रौँ भएर दुःखेमा तत्काल पानी पिउने र १० मिनेटको फरकमा थोरै केही खाने ।
६. एसिडिटी बढ्छ :
तपाईंलाई एसिडिटी बढेको छ, दिसामा कब्जियत छ, खाना राम्ररी पचिरहेको छैन भने यसको कारण शरीरमा प्रशस्त मात्रामा पानी नहुनु हो । ठीक मात्रामा पानी पिउनाले पाचन प्रक्रिया तन्दुरुस्त हुन्छ र कब्जियत हुन दिँदैन । यसले पेटमा भएको एसिडलाई पनि कमी गराउँछ ।
७. पिसाब पहेँलो हुने :
पानीको कमीले पिसाब पनि अस्वभाविक पहेँलो हुने गर्छ । लगातार पिसाब धेरै पहेँलो छ भने तपाईंलाई पक्कै पनि पानीको कमी भएको हुन्छ ।
८. श्वास गनाउने :
यदि तपाईंको शरीरमा पानीको कमी भइरहेको छ भने शरीरले सही मात्रामा थुक बनाउन पाइरहेको हुदैन त्येसैले दुर्गन्ध श्वास आउँछ । प्रशस्त थुक नआउँदा मुखमा हानिकारक ब्याक्टेरिया बन्न गई गनाउने श्वास निस्कन्छ ।
९. मुख सुक्खा रहनु :
यदि तपाईको मुख सुक्खा भै राख्छ भने त्यो पानीको कमी भएको संकेत हो । यस्तो समस्या हुनेले छेउमा सधैँ पानी राख्नुपर्छ र समय ,समयमा पिउनुपर्छ ।
योपनिहेर्नुहोस् : https://vibesnepal.com/5620.html